जान्नुहोस् ! हृदयघातवाट बच्न के के खानेकुराहरु खानुहुन्छ र खानुहुदैन भनेर ?
जनवरी 21, 2019 जनवरी 21, 2019 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments खानेकुराहरु, डा. हेमराज कोइराला, हृदयघात
हृदयघातवाट बच्न के के खानेकुराहरु खानुहुन्छ र खानुहुदैन ? मुटुरोग तथा हृदयघातवाट वच्नका लागि भोजन व्यवस्थापनको ठूलो महत्व छ । भोजनको मात्रा भोज्य पदार्थहरुको छनौट व्यक्तिको प्रकृति, विकृति (रोग), बल, वय (उमेर), सत्व (मानसिकता) आदिको आधरमा हुन अति आवश्यक छ । कार्वोहाइडेड, प्रोटिन, भिटामिन, लिपिड, पानी, रेशा, एण्टि अक्सिडेण्ट र खनिज तथा लवणहरुको उचित मात्राले यूक्त क्षेत्रिय र मौसमी खाद्यन्नहरु मुटुरोगका लागि राम्रो मानिन्छ । चमल, गहु, मकै, आलु पिडालु सुठूनी, चिनी, आटा आदिवाट कार्वोहाइडेड प्राप्त हुन्छ । घिउ, तेल र तेलिय खाद्यवाट लिपिड प्राप्त हुन्छ । माछामासु र गेडागुडी प्रोटिनको श्रोत हुन भने फलफूल, मौसमी तरकारी, हरिया सागसव्जी, कलेजो, अण्डा र रातो मासु भिटामिनको श्रोत हुन् । हृदयघातवाट बच्न के के खानेकुराहरु खानुहुन्छ र खानुहुदैन भन्ने निम्न अनुसार छन् ।
८. खानमा रेसा र चोकर युक्त खाद्यानहरुको समायोजन हुन जरुरी छ । सलाद, हरीया सागसब्जि, चोकरयूक्त पीठो, रातोचामल, सग्लै अन्नहरुमा रेसाको मात्रा ज्यादा हुन्छ । हरिया कलिला मौसमी साग, अंकुरीत गेडागुडि वा जमरामा एण्टिअक्सिडेन्टको मात्रा ज्यादा हुन्छ । एन्टिअक्सिडेन्टले थुनिएका नसा खोल्न र घात पछिको घाउ निको पार्न मुख्य भुमिका खेल्छ ।
← मृगौला खराब गर्ने आनी-बानीहरू
पारकिन्सन रोगको प्राकृतिक उपचार →
अगस्ट 28, 2018 अगस्ट 28, 2018 साइन्स इन्फोटेक 2
2 thoughts on “हृदयघातवाट बच्न के के खानेकुराहरु खानुहुन्छ र खानुहुदैन ?”
Pingback:शरीर कमजोर हुँदा खाने खानेकुराहरु